Dirk Hohndel naLinus Torvalds: Pfupiso yeLinux Kernel Virtual Summit | Linux Vakapindwa muropa
Dirk Hohndel naLinus Torvalds: pfupiso yemusangano chaiwo paLinux kernel
Linus Torvalds uye Dirk Hohndel , Director weOpen Source kuVMWare, akataura nezveramangwana reLinux uye kusimudzira kweichi chinoshamisa chirongwa panguva yekutanga kernel summit nekuda kwedenda.
Mune ino Musangano vakaongorora zvakawanda zvinhu, kubva ku saizi isina kujairika yeLinux 5.8 kernel, sezvatakataura, kune zvimwe zvinhu zvenguva yemberi yeprojekti. Mukutaura kwehukuru, zvinoita sekunge kuvharirwa kwave kuve nekukonzera, nemimwe mipiro inoita kuti vanogadzira vadzirwe pamba. Ndokunge, SARS-CoV-2 iri kumhanyisa mamwe matekinoroji.
Uye zvakare, yakave nechokwadi icho hapana wevagadziri akavhiringidzwa nehutachionaKunyangwe Torvalds ainetsekana nezve mumwe wevagadziri vayo uyo akaramba ari kunze kwemwedzi kwemwedzi kana miviri. Asi zvakazoitika kuti dambudziko raive rekudzokorora kushushikana kwekukuvara, kwakajairika pakati pevanogadzira software.
Kune rake divi, Hohndel anga achitaurawo nezve iyo kusiyanisa munharaunda kuvandudzwa kweLinux, chimwe chinhu chazvino nekuda kwekuratidzira uye mhirizhonga zviri kuitika kutenderera pasirese nekuda kwekufa kwaFloyd. Ndiine vamwe vatema vatema vakaita saKelsey Hightower naByyan Liles, kunyangwe vazhinji vari vese vachena, nekuvapo kukuru kweChinese nemaIndia sezviri pachena mumisangano iri pamusoro penzvimbo. Muchokwadi, Torvalds iye pachake akaziva kuti kune dzimwe nharaunda, senge dziye dzemamwe mapurojekiti egore, ayo akanyanya kukunda ivo ...
Paive zvakare nenzvimbo ye kuongorora basa izvo zvavari kuita izvozvi, uye izvo Torvalds anoti ndizvo chaizvo 'chaicho chinhu chakakosha kwazvo, tiri kuchenesa uye kugadzirisa matambudziko. […] Linux iri kufinha uye inofanirwa kunge iri.«. Asi zvinofinha kune vamwe, sekune vamwe zvinonyanya kunakidza, kunyanya kana iwe uchida kuyanana kwepazasi kwepasi neiyo Hardware.
About Wiki iro ramangwana rekuvandudza kweLinuxNdatove ndataura pane dzimwe nguva kuti Linus haagare nekusingaperi, uye kuti Greg ndiye ruoko rwake rwerudyi munhu anogona kutora nzvimbo. Dambudziko iri rakakurukurwawo pamusangano uyu, sezvo vazhinji vevatungamiriri varipo vava nemakore anopfuura makumi mashanu ekuberekwa. Torvalds akavimbiswa «Kwatiri hapana chimwe chinonakidza sekubatana padanho repasi neiyo Hardware uye kunyatso kutonga zvese zviri kuitika. Saka usandibata zvisiri izvo, macores haasi kufinha, asi ichokwadi chaizvo kuti vanhu vakuru vanga varipo kwemakumi emakore. Hongu, tava kuchembera.".
Vakawanda ve vagadziri vekare Ivo vatove vakatamira mukugadzirisa uye manejimendi uye vasiya yekumberi yekusimudzira. Torvalds pachake inyaya: «Ini handidi izwi manejimendi, nekuti ini handizvione semutungamiriri, asi ndizvo chaizvo zvandinoita.«. Iye zvino vagadziri vane makore makumi maviri kana makumi matatu ndivo vari kunyatso kuita basa repurogiramu.
Uyezve, Torvalds akarangarira rimwe dambudziko hombe izvo zvine: "Hatina vanochengeta zvakakwana. Zvinobuda, zvakaoma chaizvo kuwana vanhu vari vanochengetedza. Zvinonakidza uye zvinonetsa, asi chimwe chezvakaderera kuti uve muchengeti wepakati ndechekuti iwe unofanirwa kuve uripo nguva dzese. Pamwe haisi maawa makumi maviri nemana pazuva, asi zuva rega rega raunoita kune email, unofanirwa kunge uripo. […] Zvinotora nguva, zvinotora ruzivo. Kuti uve wakamboita izvo kwekanguva, semuchengeti kubva pazasi kutanga kukambaira uyezve kuwana kuvimba kwevanhu vakaringana.".
Hohndel akabvunzawo Torvalds nezve kana maC programmers angashandurwa kuva vatsva ve COBOL programmers kubva kuma2030. Linus akapindura: «Ini ndinofunga C ichiri imwe yemitauro gumi yepamusoro. Vanhu vari kutsvaga kushingairira kuti vatyaire uye zvinhu zvisina kunyanya kukosha kune kernel, semuenzaniso muRust. Vanhu vanga vachiona izvo kwemakore. Ndine chokwadi chekuti zvichaitika rimwe zuva.»
Paitove nenzvimbo taura nezve Apple uye kufamba kwayo yakananga kuARM, kusiya x86. Linus anotenda kuti izvozvi hutongi hwezvivakwa huchachinja uye hunovimbisa kuti: «Kwemakore gumi apfuura kana kupfuura ndanga ndichinyunyuta kuti zvainge zvakaoma kuwana ARM Hardware iyo inoshandiswa mukusimudzira. Iripo, asi kusvika parizvino vanga vasina kukwikwidza kweX10.«. Kune zvinhu zvakaita seAWS nema processor ayo eGraviton, asi Torvalds haafarire gore: «Vagadziri veKernel vanoda kuve nemuchina pamberi pako. […] Ini ndinoramba kukudziridza chero chinhu chandisingakwanise kushandisa sedesktop yangu".
Kune izvi zvese, Hohndel akagadzira nyambo kutaura kuti "Apple, kana iwe uchiteerera, tora Linus imwe yekutanga maARM malaptop".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kernel » Dirk Hohndel naLinus Torvalds: pfupiso yemusangano chaiwo paLinux kernel
Manjaro anosiya zvachose kutsigirwa kwe32-bit